व्यापार र लगानी आकर्षण गर्न | Nagarik News - Nepal Republic Media
व्यापार र लगानी आकर्षण गर्न
जयराम भारी, अध्यक्ष, बाग्लुङ उद्योग वाणिज्य संघ
१४ पुस २०७४ ११ मिनेट पाठ
‘कला संस्कृतिको संरक्षण, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा व्यापारको प्रवद्र्धन’ भन्ने मूल ध्येयका साथ प्रदेश नम्बर ४ स्तरीय कृषि, पर्यटन औद्योगिक व्यापार मेला तथा बागलुङ महोत्सव–२०७४ शुक्रबारदेखि बागलुङमा सुरु हुँदैछ । महोत्सले स्थानीय उत्पादनको बजारीकण, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार सहित कला, संस्कृतिमा संरक्षणमा टेवा पुग्ने आयोजको दाबी छ । महोत्सवले बागलुङको व्यापार प्रवद्र्धन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जयराम भारीसँग नागरिककर्मी संगम घर्तीमगरले गरेको कुराकानी ः
महोत्सव आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो ?
यहाँ हामीले पाँचौपटक महोत्सव आयोजना गरिएको छ । यहाँको कृषि र घरेलु उत्पादनलाई प्रचार गर्न चाहान्छौं । स्थानीय उत्पादन हातेकागज, अल्लोको धागो, सिस्नुको पाउडर, तारखोला, ढोरपाटनको आलुको बजार प्रवद्र्धन गर्दैछौं ।
ताराखोलाको स्लेट ढुंगा यहाँ उत्पादन भएर पोखरा त पुग्छ तर त्यहाँका व्यवसायीले पोखराको ढुंगा भनेर बेचेकाले ताराखोलाको ढुंगा भनेर पहिचान दिलाउन सकेका छैनौं । स्थानीय उत्पादनको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउन चाहन्छौं ।
बागलुङमा थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ठाउँ, विभिन्न कला संस्कृतिको प्रचार गर्ने लोकदोहोरी गीतको उद्गमस्थल धौलागिरी हो । कला, संस्कृतिका लागि यानीमाया, सालैजोको संरक्षण गरी दोहोरी गीतको प्रतिस्पर्धा गराउछौं । विभिन्न जनजातिको आ–आफ्नै संस्कार र संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्न, कला, संस्कृतिको जगेर्ना, पर्यटकीय गन्तव्य र स्थानीय उत्पादनको प्रचारपसार गर्न महोत्सव आयोजना गरेका हौं ।
महोत्सवमा मुख्य आकर्षण के छन् ?
दोहोरी गीत, भलिबल, छेलो र महिलाका लागि मात्रै लठो तान्ने प्रतियोगिता छन् । लोकनृत्य, मरुभूमिमा पाइने उँट यहाँ लाइएर उँटको नृत्यसमेत प्रदर्शन गर्दैछौं । बाल उद्यान र रमाइलो मेला राखेका छौं । एक सय ८० व्यावसायिक र स्थानीय उत्पादनका स्टल छन् । पर्यटकीय स्थलको फोटो प्रदर्शनी पनि छ । अँग्रेजी नयाँ वर्ष बागलुङमा मनाउने व्यवस्था मिलाएका छौं । युवायुवती काठमाडौं, पोखरासम्म जान नपरोस भनेर लाइभ डिजे कन्सर्टका साथ नयाँ वर्षलाई भव्य रुपमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ ।
विगतमा चैतमा गरिँदै आएको महोत्सव अहिले किन पुसमा ?
विगतमा हामीले चैत्राष्टमीको समयमा महोत्सव गथ्र्यौं । यहाँको बागलुङ कालिका मन्दिर र चैते दसैंको आफ्नै पहिचान छ । चैते दसैंमा स्वतस्फूर्त दर्शनार्थी आउँछन् । अहिले महोत्सव आयोजना गर्दा दुईपटक बागलुङ बजारको व्यापार प्रवद्र्धन भई अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग पुग्नेछ । चाडबाडमा मात्र नभएर मेला महोत्सवमा पाहुना आकर्षण गरी यहाँको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउन अहिले महोत्सव आयोजना गरिएको हो ।
महोत्सवले स्थानीयलाई के फाइदा पुग्छ ?
तत्कालका लागि व्यापार, व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्छ । स्थानीय व्यापार वृद्धि हुन्छ । कला, संस्कृतिको प्रदर्शन, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार, स्थानीय उत्पादन प्रदर्शनीले दीर्घकालीन बजार विस्तारमा टेवा पुग्छ । लोकगीत, भलिबलका लागि नयाँ खेलाडी र कलाकार तयार हुन्छन् । महोत्सवमा आउने पर्यटकले होटलदेखि किसानसम्म, किराना पसलदेखि फेन्सी व्यवसायीले राम्रो व्यापार गर्छन् । यहाँ लगानीबारे पनि जानकारी हुन्छ ।
जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि के पहल गरिरहनु भएको छ ?
यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यबारे प्रचारप्रसारका साथै पर्यटन बोर्डसँग समन्वय पनि गरेका छौं । देशभरका उद्योग वाणिज्य संघका एक सय ११ वटा उद्योग वाणिज्य संघमा जानकारी गराएको छौं । बागलुङ जन्मथलो भई काठमाडौं, बुटवल, पोखरा बसोबास गर्ने बागलुङेलाई जिल्लासँग जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।
भकुण्डेको होम–स्टेलाई व्यवस्थित गर्न तालिम दिएका छौं । दीर्घकालीन रुपमा पञ्चकोट, कालिका भवगती मन्दिर, भकुण्डे, बिहुँ रामकोटको मन्दिर, घोडाबाँधे, घुम्ते धुरी, ढोरपाटन लगायत क्षेत्रको प्रचारप्रसार महोत्सवमार्फत गर्ने र त्यसलाई विस्तार र विकास गर्नका लागि सबैसँग हातेमालो गर्दैछौं ।
बागलुङ रेमिटेन्सको जिल्ला भनेर चिनिन्छ । रेमिटेन्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने कस्ता योजना छन् ?
विदेशमा रहेका जति पनि बागलुङेहरु साथी छन्, उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा लगानी गर्न उनीहरु तयार छन् । त्यसका लागि तयारी गरिरहेका छौं । विदेशमा कमाएको पैसाले घरघडेरी मात्रै जोड्ने नभई एउटा परियोजनामार्फत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौं । उद्योग स्थापना वा हाइड्रोपावर निर्माणका लागि परियोजना बनाउँदैछौं ।
बागलुङको व्यापारको अवस्था कस्तो छ ?
बागलुङ–पोखरा राजमार्गको स्तरोन्नति, कालिगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्पन्न भएपछि बागलुङ बजार आर्थिक हब बन्ने अपेक्षा गरेका छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पुगेपछि बजारमा व्यापार घटेको जस्तो देखिएको छ । अब बढ्छ । यहाँ पर्यटक आगमनको चाप पनि बढ्दैछ ।
विगतमा महोत्सवबाट के उपलब्धि पायौं ?
महोत्सवले बागलुङको व्यापार प्रवद्र्धन र लगानी आकर्षणमा टेवा पुगेको छ । उत्पादनकर्ताले आफ्ना उत्पादनलाई बजारको पहुँचमा पु¥याएका छन् । व्यापारमात्र नभएर महोत्सवमा बचेको रकमबाट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य संघको खर्च र पहलमा बजार क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जडान गरेका छौं ।
जसले गर्दा बागलुङ बजार सुरक्षित छ भन्ने सन्देश गएको छ । बजारमा हुने अपराधिक क्रियाकलाप पनि घटेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकाको समन्वयमा कालो प्लास्टिकमुक्त नगर बनाउन सफल भएका छौं । बजारको सरसफाइ लगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छौं ।
बागलुङमा लगानी भित्र्याउने कस्ता योजना छन् ?
हामीले निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको साझेदार बनाउने योजना अनुसार काम गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व पनि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ । हाम्रा योजना उहाँहरुलाई सुनाउछौं । अहिले नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानीको पनि सम्भावना छ । त्यही भएर अहिलेको महोत्सव उद्घाटनमा एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्टलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौं ।
बागलुङबाट भकुण्डे गएर भकुण्डेबाट भैरवस्थानसम्म केबुलकार, बागलुङ–पञ्चकोट केबुलकारको सर्भे भइसकेको छ । कालिका मन्दिरदेखि पर्वत पाङसम्म जोड्ने झोलुंगे पुललाई अहिले यान्त्रिक पुलको रुपमा अगाडि बढाउने कि भन्ने चर्चा छ । यहाँ अन्य विभिन्न लगानीका क्षेत्र छन् । हाइड्रोपावर निर्माणका लागि दरमखोला निकै सम्भावनाको ठाउँ हो । यी मध्ये कुनै परियोजनामा उद्योग वाणिज्य संघ र एनआरएनको सहकार्यमा एउटा परियोजना सञ्चालन गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ ।
यहाँ एउटामात्रै मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालनमा ल्याउन सक्यौं भने यहाँको आर्थिक र पर्यटन विकासमा सघाउ पुग्ने छ । यहाँका सामाजिक काममा एनआरएनको सहयोग हुन सक्छ । पत्रकार महासंघ बागलुङको भवन निर्माणमा पनि सहयोग जुटाउने माध्यम बन्न सक्छ ।
प्रकाशित: १४ पुस २०७४ ०७:०६ शुक्रबार
व्यापार लगानी आकर्षण गर्न